December Mgmg: သင်အိပ်ပျော်သွားလျှင် သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကိုလည်း အိပ်စေချင်လား ?
သင်အိပ်ပျော်သွားလျှင် သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကိုလည်း အိပ်စေချင်လား ?
ခေါင်းစဉ်ကို ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိလို့ ဒီလိုပဲပေးလိုက်တာပါ ။ တော်ကြာနေ....တစ်ယောက်ယောက်က ခေါင်းစဉ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသား ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ ခြေထောက်ညောင်းတာပဲတဲ့ ။ တော်ပါပြီ ပြောတော့ဘူး။ နည်းကတော့ မဆိုးဘူး ။ စက်ကို ။ဒီတိုင်း မသုံးပဲ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ထားရင် သူ့ဖာသာသူ ပိတ်သွားတဲ့နည်းပါ ။ လိုအပ်မယ်ထင်လို့ ရေးလိုက်တာပါဗျာ ။ မလိုဘူးဆိုရင်လည်း မဖတ်နဲ့ပေါ့ :) နောက်တာ စိတ်ဆိုးရဘူး။
ကျွန်တော့်စက်က ခုတစ်လော သုံးရတာ သိပ်အဆင်မပြေလို့ ပုံတွေမှာ စာထပ်မထည့်တော့ဘူး ။ သေချာရေးပေးမယ် ။ သေချာဖတ်ပြီး သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ။
ကဲစရအောင် ... Start>>>>>Menu>>>>Search program and file မှာ ဒါလေးကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ။
task scheduler .....အဲသလိုဆိုရင် ဒီလိုလေး တက်လာမယ်
အဲဒါကို နှစ်ချက်ဆက်တိုက်လောက် နိပ်ပေးလိုက်ပါ ။ သူပွင့်လာလိမ့်မယ် ....ခဏလေးစောင့်ပေး....
အင်း....တက်လာပြီဆိုရင် Create Task ကို ရွေးပေးပါ ...ခဏလေးစောင့်......ပုံကြည့်လိုက်ပါဦး...
နာမည်ကို Shout Down at Night လို့ပေးမယ်။Run with highest privileges မှာ အစက်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါဗျာ ။ ပုံလေးကို သေချာကြည့်လိုက်ပါ ။ နားလည်တယ် ဟုတ် ။ မရဘူး ထပ်ရှင်းပြတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ။ အသစ်အသစ်တွေ ထပ်ရေးဖို့ လုပ်နေရလို့ပါ ။
ကဲ အပေါ်က ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပါဦး ခုက General နော် ။ ပြီးပြီ ဒါက ။
နောက်ထပ်တစ်ခုသွားပြီးတော့ ရွေးစရာရှိတာတွေကို ရွေးဦးမယ် ။Triggersပါ ။ အဲဒီမှာ New ကို တွေ့တယ်မလား ။အဲဒါကို တစ်ချက်လောက် နိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာ ။ ပြီးရင် Boxလေး တစ်ခုတက်လာမယ် ။ အဲဒီမှာ Daily ကို ရွေးပြီးတော့ အိုခေ ပေးလိုက်ပါ ။ ပုံကို ကြည့်ပါဦး ။
ကဲ Triggers ပြီးပြီ.. ကဲခု Actions ကို သွားပါမယ် ။အဲဒီမှာ Browse မှာ shutdown ကို ရွေးပါ ။
စကားချက် ။ ။ shutdown ကို ရှာရာမှာ Disk C>>>Window>>>>System32>>>shutdown က အစဉ်တိုင်းပါ ။မေးနေကြဦးမှာ မို့လို့ ကြိုပြောထားတာ :) :) :)
ကဲပြီးရင် အိုခေ လိုက်ပေါ့ ။ အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ ။
Actions လည်းပြီးပြီဆိုတော့ နောက်တစ်မျိုး ထပ်ပြောင်းမယ်.....Conditions ပါ ။ အဲဒါက လွယ်ပါပြီ အပုံလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အပုံကို မမြင်နိုင်မယ့် လူလည်း ရှိဦးမှာကိုး ။ အောက်မှာ မိမိအိပ်ပြီးရင် မင်းဘယ်ချိန်အိပ်ဖို့ မိမိကြိုက်တဲ့ အချိန်ကို ပြောလိုက်ပေါ့ ။ ပြောင်းလိုက်ပေါ့ ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် ။ ဘက်ထရီ ဘယ်လောက်ခံတာလဲပေါ့ ။ တော်ကြာနေ အားလည်း သွင်းမထားဘူး ။ ဒီတိုင်းပဲ သုံးနာရီလောက်နေပြီးမှ မင်းအိပ်ဆိုပြီးတော့ သွားခိုင်းလိုက်ရင် ။ အားကုန်လို့ မအိပ်ခင် ပိတ်သွားဦးမယ် ။ ပြီးမှ comment မှာ December Mgmgကြောင့်လို့တော့ လာမပြောနဲ့နော် ။ ကြိုပြောပြီးသား :P :P :P
ကဲပြန်စမယ် Conditions မှာ ချူပ်လိုက်ရင် အချိန်ကြိုက်တာရွေး အောက်ဆုံးနှစ်ခုကလွဲရင် အကုန်အစက်ထည့်ဒါပဲ ။ မယုံရင် ပုံကြည့်လိုက် ။
ကဲနောက်ဆုံးအဆင့်တောင် ရောက်လာပြီ....Settings ပါ ။ အဲဒါကို ရွေးတာလည်း မခက်ပါဘူး ။
ချူပ်ပြီးတော့ပဲ ပြောတော့မယ် ။ အရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ :)
Conditions လိုပဲ အောက်ဆုံးတစ်ခုကလွဲရင် အကုန်အစက်ထည့်ပေးလိုက် ရုံပဲဗျာ ။ ပြီးရင် အိုခေ ။ ကျွန်တော်လည်း အိုခေပြီ ။ အိပ်ပြီ ။ကွန်ပျူတာတော့ ဒီတိုင်းပဲ နောက်ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်မှာ အိပ်လို့ ပြောထားလိုက်ပြီ ။ အဆင်မပြေရင် ပြောပါဗျာ ။ သိကျွမ်းတဲ့လူတွေက ပြောပြပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်တော့ တော်ပြီ ပြောပြတော့ဘူး ။
Labels: Computer, Tricks And Tips